:: My Little World ::: September 2013
မိုးရွာအပြီးမှာ.. တွေ့ လိုက်ရတဲ့ စင်္ကာပူ ဒေစီ...
ဒီလို ပန်းလေးတွေမြင်ရင် လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖုန်းကို အသုံးမချပဲ မနေနိုင်ဘူး။
[Wiki] Sphagneticola trilobata, commonly known as the Singapore Daisy, Creeping-oxeye, Trailing Daisy, and Wedelia.
Labels: Cute, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 9/26/2013 02:34:00 PM0comments
ညီမ၊ အစ်မ ရှိတဲ့သူတွေ ဒီထဲက တစ်ခု ထက်မကကို ကြုံဖူး၊ ပြုလုပ်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ညီမ၊ အစ်မ မဟုတ်ပါဘူး၊ မောင်နှမ ရှိတဲ့သူတိုင်း ဒီထဲက အချက်တွေကို ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ မောင်နှမတွေ အတူရှိချိန်တွေမှာ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၉ ကို လုပ်နေကြပဲ။ အနေနီးနီး ဝေးဝေး အမြဲမှန်တာက နံပါတ် ၁၀ ပါပဲ။
We all love our brothers and sisters. Yes, I love my brothers and sister :-)
Posted by Nay Nay Naing at 9/15/2013 11:37:00 AM0comments
ဒီနေ့ နေ့ လည်စာ ထမင်းဘူး ယူဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ။ စားတာများသွားလား မသိဘူး၊ နေ့ လည်စာစားပြီး အိပ်ချင်နေတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/12/2013 02:11:00 PM0comments
စင်္ကာပူမှာလည်း ဒါမျိုးတွေ ကြုံရတယ်။
ဒီမနက် အလုပ် အလာလမ်းမှာ ကြုံလိုက်ရတာ။ အောချက်လမ်းမှာ ရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ မြင်ဖူးပေမယ့် ကိုယ်နေတဲ့ နေရာ၊ အလုပ်အသွားလမ်းမှာ ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ ဒါပထမဆုံးပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/05/2013 11:11:00 AM 1 comments
ဒီနေ့နေ့ လည် သိပ်မဆာတာနဲ့့ ထောပတ်သီး ဖျော်ရည်တစ်ခွက်နဲ့မာလကာသီး နည်းနည်းစား ဖြစ်တယ်။ ထောပတ်သီး ဖျော်ရည်ဆိုတာ အမေနဲ့ညီမလေးက အကြိုက်ပဲ။
ရန်ကုန်မှာ ထောပတ်သီး ပေါ်ချိန်ဆို ထောပတ်သီး စိမ်းတွေ ၀ယ်ပြီး နို့ ဆီနဲ့ ခေါက်ပြီး စားကြ၊ ဖျော်ရည် ဖျော်သောက်ကြတယ်။ သူတို့ ဘယ်လို တိုက်တိုက် အီလို့ ဆိုပြီး သောက်လေ့ မရှိခဲ့ဘူး။ အမြဲ ငြင်းခဲ့တယ်။ ခုတော့လည်း တခါတလေ ထမင်မစားချင်စိတ်မရှိရင် သောက်ဖြစ်တယ်။
NUS PGP Canteen က ထောပတ်သီး ဖျော်ရည်သောက်လို့ကောင်းတယ်။ တခြား တွေ၊ တခြား ကင်တင်းတွေက ထောပတ်သီးဖျော်ရည်တွေလို ထောပတ်သီး အနံ့ပါတယ်ဆိုယုံ ထည့်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ထောပတ်သီး အရသာပေါ်တယ်။ တစ်ခွက်ကို SG$2.80။ ချောကလက် မပါနဲ့မပါတာဆို နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ ဈေးတူတူပဲ။ ချိုတာ မကြိုက်လို့ ချောကလက်မပါတာပဲ သောက်လေ့ ရှိတယ်။
ပုံက ဒီနေ့ရိုက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ရိုက်ထားတာ အတော်ကြာပြီု။ ဘာမှ မပါတာထက်စာရင် ချောကလက်ပါတဲ့ ခွက်က ပိုလှတယ်ထင်လို့သူများတွေ သောက်တုန်း ရိုက်ယူထားဖြစ်ခဲ့တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/02/2013 03:16:00 PM0comments